NewTek TriCaster® Mini 4K သည်ထုတ်လုပ်သူများမည်သည့်နေရာမှမဆိုပရိသတ်သို့ရောက်ရှိရန်အထောက်အကူပြုစေရန်မြေပြင်နည်းပညာဆော့ဝဲလ်အင်္ဂါရပ်များဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်။ NAB သတင်းများ | 2021 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » NewTek TriCaster® Mini 4K သည်ထုတ်လုပ်သူများအားနေရာဒေသများမှပရိသတ်များထံရောက်ရှိစေရန်မြေပြင်နည်းပညာဆော့ဝဲလ်အင်္ဂါရပ်များဖြင့်တိုးမြှင့်ထားသည်။
အစွမ်းထက်သောအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အဝေးထိန်းထိန်းချုပ်မှုအင်္ဂါရပ်များ Live Story Creator နှင့် LivePanel တို့သည်ရှိပြီးသား virtual ပစ္စည်းများ၊ အဝေးထိန်း calling ည့်ခေါ်ဆိုမှု၊ လူမှုမီဒီယာပေါင်းစည်းခြင်း၊
NewTekအိုင်ပီအခြေပြုဗီဒီယိုနည်းပညာနှင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် Vizrt အုပ်စုသည်ယနေ့TriCaster® Mini 4K ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုကြေညာခဲ့သည်။ စျေးကွက်တွင်အပြည့်စုံဆုံးကျစ်ကျစ်လစ်သောကင်မရာဖြင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်သော Multicamera ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုစနစ်အသစ်ဖြစ်သော TriCaster Mini 4K သည် Live Story Creator နှင့် LivePanel တို့ကဲ့သို့သောအခြေခံသဘောတရားများကိုထပ်မံဖြည့်စွက်သည်။ သီးခြားထုတ်လုပ်သူများသို့မဟုတ်အဖွဲ့ငယ်များအတွက်ကွန်ယက်အရည်အသွေးပြပွဲများကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ အတွေ့အကြုံမရှိသေးသူများသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိဗီဒီယိုကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည်။
တိုးချဲ့ထားသော TriCaster Mini 4K သည် living ည့်ခန်း၊ ကားဂိုဒေါင်သို့မဟုတ်မြေအောက်ခန်းများကိုစီးပွားရေး၊ ဝတ်ပြုရာအိမ်၊ ကျောင်း၏အမှတ်အသားသို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်ကိုထင်ဟပ်စေသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်စတူဒီယိုတစ်ခုသို့ထုတ်လွှင့်ခြင်းအရည်အသွေး၊ အပြည့်အဝစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော virtual ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်ကျယ်ပြန့်သောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်များဖြင့်လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်အေဂျင်စီ။ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုဂရပ်ဖစ်၊ မီဒီယာပြန်ဖွင့်ခြင်း၊ တစ်ချက်ထိအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု၊ ရုပ်သံလိုင်းပေါင်းစုံဝေးလံသော Skype ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု၊ ပေါင်းစည်းထားသည့်ပြန်ဖွင့်မှု၊ လူမှုမီဒီယာပေါင်းစည်းမှုနှင့်အခြားအရာများအားလုံးသည် UHD p60 resolution ဖြင့်အပြည့်အဝပေးအပ်သည်။
"NewTekလူတစ်ယောက် (သို့) အဖွဲ့ငယ်တစ်ခုအနေဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်တူသောပြပွဲတစ်ခုကိုပြသနိုင်ရန်မှာအမြဲတမ်းဖြစ်သည်။ ဒီဟာကပိုပြီးသက်ဆိုင်တဲ့အချိန်တစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူး” ဟု R&D ဥက္ကpresident္ဌ Dr. Andrew Cross ကပြောကြားခဲ့သည် Vizrt အုပ်စု။ TriCaster Mini 4K အသစ်သည်စီအီးအိုမှအမှုတော်ဆောင်များသို့ဆရာ၊ ဆရာမများကိုမည်သူမဆိုအံ့အားသင့်ဖွယ်အစီအစဉ်များကိုဖန်တီးနိုင်ပြီးမည်သည့်နေရာမှမဆိုအွန်လိုင်းပေါ်သို့တင်ပေးသည်။
Live Story Creator သည်လူတစ် ဦး ချင်းအား Microsoft Word® document တစ်ခုမှထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုလုံးကိုလုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်Word®တွင်တည်ဆောက်ထားသော script တွင် TriCaster Mini 4K ထဲသို့ထည့်သည့်အခါအစပျိုးလုပ်ဆောင်မှုများပါ ၀ င်သည်။ ဇာတ်လမ်းပြောသူသည်နည်းပညာဆိုင်ရာတည်ဆောက်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုထက်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းအပေါ်သာအာရုံစူးစိုက်စေသည်။
LivePanel သည်ဒေသတွင်းnetworkရိယာကွန်ယက်ပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည့် browser အခြေခံအဝေးထိန်းခလုတ်အား TriCaster Mini 4K ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ တင်ပြသူအပါအဝင်မည်သူမဆိုအပါအဝင်ကိရိယာများမှစက်ပစ္စည်းများမှတိုက်ရိုက်ပြောင်းခြင်း၊ တက်ဘလက်များ၊ စမတ်ဖုန်းများနှင့်လက်တော့ပ်များ။ Configable လုပ်ထားသော macros များကိုယခုတွင်လည်းထောက်ပံ့ပေးပြီးခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့်ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်အစီအစဉ်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စေသည်။
Skype ထည့်သွင်းမှုလိုင်းနှစ်မျိုးသည်တစ်ပြိုင်နက်တည်း guest ည့်သည်မျှဝေသူများကိုသူတို့၏စတူဒီယိုများ၊ လက်ပ်တော့များသို့မဟုတ်ကမ္ဘာအနှံ့ဖုန်းများမှပါ ၀ င်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အားလုံးသည်ခေါင်းစဉ်များ၊ နှစ်ထောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အခြားအရာများအတွက်ထုတ်လွှင့်သည့်ဂရပ်ဖစ်ဖြစ်သည်။ TriCaster Mini 4K သည်မကြာသေးမီကကြေငြာထားသော Spark Plus IO 4K p60 ကုဒ်နံရံ / ကုဒ်နံရံပြောင်းစက်နှစ်ခုပါ ၀ င်ပြီး IP-based, NDI®-first workflows ကိုလက်ရှိသွင်းအားစုများနှင့်ရလဒ်များကိုအသုံးပြုသည်။
TriCaster Mini 4K အကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ပြည့်စုံသောအင်္ဂါရပ်များစာရင်းကို ကျေးဇူးပြု၍ သွားပါ www.newtek.com/tricaster/mini/.
TriCaster Mini 4K ကိုဒေါ်လာ ၇,၉၉၅ USMSRP ဖြင့်ရနိုင်သည်။ နိုင်ငံတကာစျေးနှုန်းများကွဲပြားနိုင်သည်။
အကြောင်းပိုသိချင်တယ်ဆိုရင် NewTek, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.newtek.com.
NewTek IP ဗီဒီယိုနည်းပညာတွင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ ဇာတ်ကြောင်းပြောသူတိုင်းကိုဗီဒီယိုမှတစ်ဆင့်အသံပေးသည်။ ၎င်း၏ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းချက်များကိုစျေးကွက်သို့ရောက်စေရန်ကမ္ဘာအနှံ့ရွေးချယ်ထားသည့် Channel Partners နှင့်သီးသန့်အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ NewTek ဖောက်သည်များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ပရိသတ်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုယခင်ကထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာကြီးထွားစေရန်စွမ်းအားပေးသည်။ NewTek ထုတ်ကုန်များသည်NDI®မှတစ်ဆင့် IP ကိုဗဟိုပြုသည်။
၀ န်ထမ်းများပါဝင်သည်မှာယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတရားရုံးချုပ်၊ နယူးယောက်ကုမ္ပဏီကြီးများ၊ NBA ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ NHL၊ နီကယ်လွန်းဒွန်၊ CBS ရေဒီယို၊ ESPN ရေဒီယို၊ Fox Sports၊ MTV၊ US Fortune ၁၀၀ ၏ ၈၀% ကျော်။
NewTek ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Vizrt ၎င်း၏အစ်မအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူအုပ်စု, Vizrt နှင့် NDI ။ NewTek ဤအဖွဲ့၏ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းကိုသာလိုက်နာသည်။ ပိုပြီးပုံပြင်များ, ပိုကောင်းတဲ့သို့ပြောသည်။ www.newtek.com
ယခင်: Pliant Technologies က Wireless Intercom Trade-In Promotion ကိုကြေငြာခဲ့သည်
နောက်တစ်ခု: ဆော်ဒီအသံလွှင့်ဌာနမှဆက်သွယ်မှုပေါင်းစုံပါရှိသည့် Multichannel Networking နှင့် Playout Solution ကိုပေးစွမ်းရန်ဆက်သွယ်မှုကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ